1% Ukuvuleleka Abakhiqizi Nabahlinzeki - China 1% Imboni Yokuvula
Umhlobiso Wasekhaya Uphuphuthekisa Indwangu Yomthunzi Ye-Windows Sunscreen Polyester
Amakhethini impahla egumbini lokuphumula.
Amakhethini kakotini nelineni
Indwangu yamakhethini yendwangu kakotini nelineni ibonakala ngobuso bayo obuqinile, umoya omuhle kakhulu wokungena emoyeni kanye nokumelana nokugqoka. Njengendwangu yamakhethini, kuyisinqumo esihle. Ingakwazi ukumunca uthuli oluthile emoyeni. Ukubonakala kwendwangu yekotini nelineni kulula futhi kunhle, kunomqondo oqinile wobuhle bemvelo kanye nokukhanya okuthambile.
I-Front Cartoon Sunshade Colorful HDPE Anti UV Shade Mesh Solar Screen Fabrics
Ngokusabalala komqondo wokuphila okunempilo, abantu baqala ukukhuthaza impilo yemvelo "yekhaya elihlaza", benethemba lokwethula isitayela semvelo ekamelweni lokuphumula, ukuletha ubungqabavu obungapheli kanye nobungqabavu emndenini. Namuhla, sizokwethula uchungechunge oluncane lwamakhethini ukuze sikutshele ukuthi ungasebenzisa kanjani umbala wemvelo, sikususe edolobheni elinezinkathazo, futhi ubuyele empilweni yemvelo futhi elula yamakhethini asekhaya!
Ngombala oluhlaza njengomzimba oyinhloko, ikhaya ligcwele ubungqabavu nobungqabavu.
Izingxenye ze-Double Polyester Roller Blinds Indwangu Evikela ilanga Engu-75cm Ububanzi Ehhotela
Isici esisebenzayo se-roller shade fabric-UV blocking
Njengoba sonke sazi, lapho imisebe ye-ultraviolet elangeni ikhanyisa isikhumba, izodala umonakalo othile esikhumbeni. Ngokusho kocwaningo, i-photodermatitis ingenzeka lapho imisebe ye-ultraviolet inzima, futhi i-erythema, ukulunywa, amabhamuza, i-edema, njll ngisho nomdlavuza wesikhumba. ngaphezu kwalokho, lapho imisebe ye-ultraviolet elangeni isebenza esimisweni sezinzwa esimaphakathi, izimpawu ezinjengokukhanda ikhanda, isiyezi, nokwenyuka kwezinga lokushisa lomzimba , imisebe ye-ultraviolet esebenza elangeni esweni ingabangela i-conjunctivitis futhi ingase ibangele nolwelwesi lwama-cataract. Ngaphezu kwalokho, ukukhanya kwelanga okuqondile kwesikhathi eside kuzokhuthaza ukuguga okusheshayo kanye nokuguquka kombala kwefenisha nempahla.
Amakhethini e-Sunscreen ane-Pattered Spring Roller Blind Office Amakhethini Izindwangu
Thuthukisa ukukhanya kokukhanya
Indawo yokukhanya ithintwa Ukukhanya nokukhanya. Ngemva kokuba ukukhanya kungene ngokuqondile ekamelweni, ukukhanya okunamandla kungaveza imiphumela engokoqobo endaweni yasendlini kanye nokuziphatha kwabantu nemisebenzi, kungashukumisa ukusabela kwabantu ngokwengqondo, kuthinte isimo sengqondo sabantu kanye nezinga lokuphila, ngakho-ke thuthukisa ukukhanya kwangaphakathi endlini kubaluleke kakhulu.
Indwangu Ekhanyayo Nombala Omnyama I-Vinyl Sunscreen
Izinto ze-sunshade zivame ukubizwa ngendwangu ye-sunshade nendwangu ye-sunscreen. Ivamise ukudlula ukukhanya futhi igcina inani lokukhanya ekamelweni kuyilapho umthunzi welanga uvikela ukushisa. Umklamo omuhle we-sunshade awulethi nje kuphela isimo sezulu, isiqandisi kanye nokonga amandla ekamelweni lokwakha, kodwa futhi uletha ukukhanya okunethezeka ekamelweni lokwakha, kanye nomphumela omuhle wokuhlobisa kwangaphakathi nangaphandle.